Zvisina kurongwa - Peji 3 - Sangano Rekunyorera repasi rose Sangano
Zuva: Nyamavhuvhu 30, 1: 30-2: 30pm EST
Presenters: Lauren Fitzgerald naShareen Grogan
IWCA Mentor Match Chirongwa Webinar Series
Isu tese tinoziva kuti idzi inguva dzakaomarara dzekunyora nzvimbo uye nevanhuwo zvavo. Asi isu tinodawo kufambira mberi. Tinoita sei izvozvo? Tichatanga nekutsvaga pamusoro pekuonga tobva tataura nyaya nezve (dzimwe nguva kushomeka) zviwanikwa uye midziyo yatinofanira kuvaka pamusoro. Vatori vechikamu vachataura mumakamuri ekupaza kwehafu yepiri yeawa. Chinangwa chedu ndechekupa tariro uye kuvaka nharaunda.
Nhengo dzese dzeICAA dzinogamuchirwa kujoina, saka ndokumbirawo unzwe wakasununguka kukoka shamwari dzako. Ichi chiitiko chekuuya uye kuenda; kana iwe uchikwanisa kuenda chete kuchikamu chewebhu, unogamuchirwa kuti ubatane nesu.
Ndokumbira kuti ubate Molly Rentscher (mrentscher@pacific.edu) kune rumwe ruzivo.